FIX ရန်ကဘယ်လို - ဒါဟာ WINDOWS 10 ကိုအလုံအလောက် DISK SPACE ကိုမဟုတ်ပါဘူး - WINDOWS ကို - 2019
Fix ရန်ကဘယ်လို - ဒါဟာ Windows 10 ကိုအလုံအလောက် disk space ကိုမဟုတ်ပါဘူး
Windows ကို 10 users " ... သင် disk ပေါ်မှာနေရာလွတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှုရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ disk space ကိုထဲက disk ကိုပြေးမလုံလောကျအာကာသက" အမြဲတမ်း၏အကြောင်းကြားစာ၏ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရမည်အကြောင်း,
(ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာဖြစ်လတံ့သော) ကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းတဲ့ဟာ disc ကိုဆင်းပြုတ် "အနိမျ့ Disk Space ကို" ဟုအသိပေးစာဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့ခေါင်းစဉ်အပေါ်အများစုကညွှန်ကြားချက်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အစဉ်အမြဲလိုအပ်တဲ့ disk ကိုသန့်ရှင်းရေးမဟုတျပါဘူး - တစ်ခါတစ်ရံသင်ရုံနေရာမရှိခြင်း၏အကြောင်းကြားစာကို turn off ဖို့ရှိသည်, ဤ option ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့် disk ပေါ်မှာနေရာမလုံလောက်မဟုတ်ပါဘူး
ကို default operating system ကိုအရင်ဗားရှင်းနဲ့တူမှာ Windows 10, မှန်မှန်အားလုံးသင့်ဒေသခံ drives တွေကိုအပေါ်နေရာလွတ်များရရှိနိုင်မှုအပါအဝင်စနစ်, check လုပ်ပေးပါတယ်။ တံခါးခုံကိုတန်ဖိုးများကိုရောက်ရှိဖို့အပျေါမှာ - ထိုအသိပေးချက်ကိုဧရိယာထဲမှာ 200, 80, နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်အာကာသ၏ 50 MB အထိအသိပေးစာ "အနိမျ့ Disk Space ကို" ပုံပေါ်ပါတယ်။
သင်ဤအသိပေးစာကိုမြင်ရလျှင်, အောက်ပါ options များ
ဒါဟာစနစ် disk ကို partition ကို (C ကိုမောင်း) သို့မဟုတ်သင်သင့် browser ၏ cache များအတွက်အသုံးပြုကဏ္ဍများကိုယာယီဖိုင်များ, Backup တွေကိုနှင့်အလားတူပြဿနာများအချို့မှကြွလာသောအခါ, အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေရဲ့ disk ကိုရှင်းလင်းရန်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ (default အဝှကျထားရပါမည်ဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့်ဒေတာများနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိသော) ကိုပြန်လည်နာလန်ထူစနစ်၏ပြသအပိုင်းအကြောင်းပြောနေတာနေတယ်ဆိုရင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး disk ပေါ်မှာ, အထူးသက "မကျြဆ" နှင့်ပြည့်စုံသည် (နှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြောင့်မလိုအပ်ပါဘူး), ကမလုံလောကျသောအကြောင်းကြားစာကို disable လုပ်ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည့် disk space ကိုများနှင့်ပထမဦးဆုံးအမှုအဘို့ - တစ်ဦးက hidden system ကို partition ကို။
စနစ်ပေါ်မှာနေရာလွတ်၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိအကြောင်းကြားစာ၏အသွင်အပြင်မှဦးဆောင်မသာဖြစ်သောကြောင့်စနစ် drive ပေါ်တွင်အလုံအလောက်နေရာလွတ်, အဲဒါကိုရှင်းလင်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအသိပေး, ဒါပေမယ့်လည်းမှတ်သားလောက် "ဘရိတ်" ကို Windows 10 မှဆိုပါကတူညီသော partitions ကိုသက်ဆိုင် စနစ်အသုံးပြုသောဆိုလမ်းထဲမှာ (ဥပမာ, သင် cache ကို, swap ဖိုင်, ဒါမှမဟုတ်အခြားတစ်ခုခုအဘို့ထိုသူတို့ကို set up) ။
အလိုအလျောက် Disk Cleanup က Windows 10
မလိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုကို C drive ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း
အဆိုပါ Windows.old folder ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ကြောင့်ကို C drive ကို disk ကို: D တိုးမြှင့်ဖို့ဘယ်လို
ငါ disc ကိုပျေါအဘယျအလုပ်များရာအရပျကိုဘယ်လိုသိသလဲ
လိုအပ်သောလျှင်, သင်ရိုးရှင်းစွာပေါ်သောအရာ disk space ကိုများမရှိခြင်း, ပတ်သက်. သတင်းစကားကို disable နိုင်ပါတယ်။
Windows 10 ကိုအတွက် disk space ကိုများမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးချက်များကိုပိတ်ထားပါ
တစ်ခါတစ်ရံထိုပြဿနာကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အောက်တိုဘာလ 1803 အတွက်မကြာသေးမီက Windows updates များကိုပြီးနောက်, များစွာသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ကလုံလောက်အောင်အာကာသအချက်ပြလိုက်ခြင်းကြောင်းဒေတာနှငျ့ပွညျ့စုံကို default အားဖြင့် (ဝှကျထားရပါမည်) ကိုထုတ်လုပ်သူရဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူ partition ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Windows 10 ကိုအတွင်းပြန်လည်နာလန်ထူ partition ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကိုဘယ်လိုကူညီလမ်းညွှန်သင့်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံပင်ကိုလြှို့ဝှကျနာလန်ထူ partition ကိုအပြီး, သတိပေးချက်များပေါ်လာဖို့ဆက်လက်။ ဒါဟာသင်အထူးသအပြည့်အဝယူကြပြီတဲ့ disk ကိုသို့မဟုတ် disk ကို partition ကိုရှိသည်နှင့်မရာအရပျရှိကွောငျးအသိပေးခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, သငျသညျရရှိနိုင် disk space ကိုများနှင့်ဆက်စပ်အကြောင်းကြားစာများ၏အသွင်အပြင်၏စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကို disable နိုင်ပါတယ်။
ဤသည်ကိုအောက်ပါရိုးရှင်းခြေလှမ်းများကို အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်:
ကီးဘုတ်ပေါ်စာနယ်ဇင်းဝင်း + R ကိုဝင် regedit လို့ Enter နှိပ်ပါ။ Registry Editor ကိုဖွင့်ပါ။
Registry Editor ကိုမှာစာရင်း (လက်ဝဲ pane ထဲကကိုဖိုင်တွဲ) ကိုလမ်းညွှန် HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies Explorer ကို (ထို Explorer ကို subkey ပျောက်ဆုံးလျှင်, "folder ကို" မူဝါဒများပေါ်တွင် right-click နှိပ်. ကဖန်တီး) ။
(သင် 64-bit နဲ့ Windows 10 ကိုများပင်လျှင်) 32-bits ၏ DWORD value ကို - Registry Editor ကို၏ညာဘက် pane ထဲကကို right-click နှိပ်ပြီး "ဟု New" ကိုရွေးချယ်ပါ။
နာမည်တစ်ခု Specify NoLowDiskSpaceChecks ဒီ parameter သည်များအတွက်။
သို့သော်လည်း parameter ကို Double-click နှိပ်ပြီး 1 မှ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုပြောင်းပေးပါ။
ထိုအခါ Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်ပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။
ဤအခြေလှမ်းများပြီးပါကပြီးနောက်, disk ကို (သော်လည်းကောင်းတစ်ဦး disk ကို partition ကို) နေရာမလုံလောက်ဘူးဆိုတာက Windows 10 အကြောင်းကြားစာပေါ်လာပါဘူး။